Ny lokon’ny fitiavana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny lokon’ny fitiavana
Raha vao ny lokon’ny fitiavana izany no resahana dia maro no tonga antsaina. Loko mena mitory fitiavana miredareda. Na koa loko fotsy ho an’ireo efa hiroso amin’ny mariazy fa matetika dia ny lamba miloko fotsy no ampiasain’ny vehivavy ho fitafy amin’ny andro manokana. Ary ahoana kosa ny lokon’ny fitiavana eo amin’ny poeta Toetra Ràja ?
“Ny lokon’ny fitiavana ao amin’ny tononkalon’i Toetra Ràja” dia lohatenina velakevitra iray notontosaina tao amin’ny Akademia Malagasy eny Tsimbazaza. Ny sokajy "Haikanto sy Hailaza" tarihin’ny filohany Randriamamonjy Esther no mpampiantrano. Ary i Andrianasolo Hajaina Naomy, filohan’ny Fikambanana Havatsa-UPEM, no nanao ny famakafakana io lohahevitra io.
Toetra Ràja satria ?
Teo ampiandohan’ny fanolorana ny fanadihadiana dia nanazava ny antony nisafidianana ny poeta Toetra Ràja i Andrianasolo Hajaina Naomy. Nambarany fa ho azy dia zava-dehibe ny fahitana fa na any ivelan’i Madagasikara aza ny Malagasy iray dia hafaliana no mahita azy miezaka mampiasa ny teny malagasy. Ary eto tsy vitan’izay mampiasa izay ihany fa tena tsapa fa mahafolaka ny teny Malagasy ity mpikambana ao amin’ny Havatsa-UPEM ity. Mahafolaka ihany koa ny fanoratana poezia na manara-drafitra izany na koa malala-drafitra. Nilaza koa i Andrianasolo Hajaina Naomy fa noho ity mpanoratra ity mpikambana ao amin’ny Havatsa-UPEM no nisafidianana azy.
Ankoatra izay dia nilaza ny mpamela-kevitra fa noho ny fahitany lokon-tsara maro samihafa ao anatin’ny tononkalon’ity poeta ity no nahatonga azy nifidy io lohahevitra io. “Tsikaritra ao tokoa mantsy ny tokam-bolo, ao ny miava-bolo fa ny iraisan’ireo dia ny fitiavana mangarahara avokoa, izay tena aloaky ny fo sy ny saina tsy misy haratsiam-panahy” hoy i Andrianasolo.
Nilaza ny filohan’ny Havatsa-UPEM fa tsapa eo anivon’ny fiarahamonina fa mihavery ny fampiasana ny teny malagasy ranoray ary koa ny fahafehezana ny fanoratra tononkalo. Mitovy ahiahy amin’izany koa i Toetra Ràja izay toa izao no voasoratra ao amin’ny bokiny (TIAKO- TIAKO FOANA) (tak. 15)
"Eny antsefatsefaky ny fehezantenin’ny fiaraha-monina anefa no mazàna paradisan’ny voambolana vahiny sy ny fahadisoan-tsipelina. Ny teny hono anefa manan-jiny. Sarotiny ny pôetanao raha mbola ny tenin-dreny no asiana resaka”.
Manantena ny fikambanana fa ho fitarikandro ny asa soratra tahaka izao.
Araka ny teny natao teny ampiandohana dia raha vao mandre hoe lokon’ny fitiavana dia loko maro samy hafa no mby antsaina tahaka ny ambaran’ny tononkalon’i Ratsimiseta Jasmina hoe “Raha maty aho” izay betsaka ny mpanakanto no mihira azy… ka loko efatra no voatanisa ao (Fotsy sy mavo ary manga sy mena). Na koa ny tononkiran’i Mahaleo amin’ilay hira Jamba izay hilazany fa loko tokana ny an’ireo jamba ireo tononkira izay milaza fa misy ny lokon’ny fitia.
Tany amin’ny fizarana fahatelo tamin’ny famelabelaran-kevitra no nandrosoan’i Andrianasolo ireo karazana loko samy hafa hitany. (Ireo fizarana roa : Haitsikera ara-tantaram-piainana, Fahaizan’i Toetra Ràja mandrafitra tononkalo)
Mainty sy fotsy. Voalohany tamin’izany ny mainty sy fotsy izay manambara fa manan-javatra tiana holazaina tsy ankihafihafy dia ny fitiavana ny teny malagasy amin’ny alalan’ny haisoratra. Porofoiny amin’ny alalan’ny haisoratra ny lokom-pitiavany ny teny malagasy izay midika ho fitiavan-tanindrazana ary na amin’ny fomba masiaka, na amin’ny fomba hentitra, na amin’ny fomba manambitamby dia abaribariny izany.
aho rey olona,
(TONONKALO, tak 12)
Mangamanga. Ny lokom-pitiavana asehon’i Toetra Ràja manaraka dia toa mangamanga, mangan’ny lalan-ko avy eo anilan-janaka, mangan’ny fitiavana ilay olon-tiana, manga madio manganohano.
(ZANAKO, tak 19)
Mena. Mbola ventesin’i Toetra Ràja ato anatin’ity lokom-pitiavana ity ihany koa ny mena midorehitra. Fitiavana te hisisika ho tiana ka mitady hevitra mafy hahazoam-baliny. Ny fitiavana efa mivaivay rahateo, toy ny afo ka sady mena no mafana, miandrandra fifanatonana, na amin’ny fomba mahatsikaiky, na amin’ny fomba mampalahelo, na amin’ny fomba mivantambantana.
(RAHA EKENY, tak 30)
Matroka. Ahitana loko fanairana matroka toa manambana fahadisoam-panantenana ao amin’ny tononkalon’i sToetra Ràja. Mety ho fahadisoam-panantenana noho ny fitiavana tsy araka izay iheverany azy, na fahadisoam-panantenana noho ny fiainana tsy ho amin’ny tokony ho zotrany.
hay ka bala
tsy an’ny tena!
(PI-MASO, tak 47)
Loko…Misy loko tokana aroson’i Toetra Ràja ametrahany ny maha POETY azy ao anatin’ireo tononkalo nosoratany. Loko tokana toa zary manome fanantenana indray, manome vahaolana amina lafin-javatra maro. Anankiray àry dia ny loko FINOANA izay manjarano, mamirapiratra. Manana finoana azo dinihina ho hentitra mankany amin’ilay Mpahary inoany i Toetra Ràja, asandrany amin’ny alalan’ny fandrafetan-teny izany ary itaomany ny rehetra hiara-hitolona hahazoam-pandresena.
sy tsy foiko:
(VAVAKA, tak 104)
Resaka loko no notsongaina etoana fa azonao arahana manontolo kosa ny tatitry ny famelabelaran-kevitra ao amin’ity rohy manaraka ity :
Resa-poty : Fan Zone - il y a 5 jours
Coulisse du foot : Entre sorcellerie et superstition - il y a 19 jours